Fanomanana angon-drakitra Talend: Mora ny miditra, manadio ary manomàna angona CRM | Martech Zone
Fanomanana angon-drakitra Talend: Mora ny miditra, manadio ary manomàna angona CRM anao
Zoma, Febroary 19, 2016 Zoma, Febroary 19, 2016 Douglas Karr
Vao avy nody ianao, herinandro lasa izay, tao Vegas, izay niasa tamin'ny varotra indostrialy iray hafa. Reraka ianao, voasintona tanteraka amin'ny mailaka sy tetikasa hafa, ary manana fitarihana fitarihana vaovao izay mila hamarinina ary hiditra ao amin'ny rafitry ny CRM anao. Raha mibanjina ilay takelaka misy anarana lehibe Excel ianao dia fantatrao fa hitondra anao tontolo andro hanodinana ny angon-drakitra fifandraisana.
Ny miditra sy manadio ny angon-drakitrao dia toy ny mijery maina maina - mankaleo ary mamono fotoana lehibe. Eo ho eo ihany izy amin'ny fandanjana ny bokinao, ny fanaovana lovia sy ny fanadiovana ny garazy.
Na izany aza, ny angon-drakitra madio dia ampahany manandanja amin'ny fizotry ny varotra sy ny varotra. Ny safidy dia fako-in = fako-fivoahana. Ny fanafarana sy fizarana angon-drakitra tsy voaomana dia mety hitondra valiny mahakivy ary handany fotoana sy vola. Eny, ahoana raha misy fitaovana mora mampihomehy izay mampihena ny fotoana lany amin'ny fanadiovana sy famolavolana ny datao mandritra ny ora maro ka hatramin'ny minitra vitsy?
Soa ihany fa ao an-tsaina ny angon-drakitra mamirapiratra Talend mahatsapa ny fanaintainanao ary namaly tamina vahaolana vaovao antsoina Fiomanana amin'ny angona talend. Ity rindranasa birao vaovao sy maimaimpoana ity dia ahafahanao manombatombana, manadio ary manambatra angona avy amin'ny loharano samihafa ao anatin'ny minitra miaraka amin'ny fitaovana mora ampiasaina sy mitarika anao mandritra ny fizotrany. Toy ny mandeha mitsangantsangana ao amin'ny valan-javaboary…
Marina izany, vakinao eto aloha ny ankizy! Atombohy amin'izay ny drafitra an'io lalao basikety tolakandro na manicure / pedikyur io satria efa hiverina amin'ny JEROSY ianao amin'ny andronao. Ok, angamba izaho dia be fanantenana loatra amin'io lafiny io, fa amin'ny fahamatorana rehetra, ny Talend Data Preparation, dia mamela anao hijanona tsy handany fotoana sarobidy manadio sy crunching angona ary afantohy amin'ny ezaka stratejika bebe kokoa ny ezaka ataonao toy ny famakafakana ny ROI amin'ny hetsika amin'ny ankapobeny ary afaka mizara izany fahitana izany amin'ny ekipanao (mahazo anao teboka brownie lehibe — Bonus !!)
Ity misy fijerena amin'ny fomba Fiomanana amin'ny angona talend afaka manamora ny asanao. Voalohany, andao hodinihintsika ny sasany amin'ireo dingana raisinao rehefa manomana angona ho an'ny famakafakana mba hamaritana raha toa ka nisy ROI manan-danja io fivarotana io. Manomboka eo dia mety ho toa zavatra toa izao ny angon-drakorakoranao:
Ankehitriny dia mila manamarina ny angon-drakitra ianao raha misy ny marina; miantoka ny sandan'ny sandam-bola ampiasaina - izany hoe Andriamatoa vs. Ramatoa na Ramatoa.; miantoka ny fahafenoan'ny fampahalalana amin'ny sehatra rehetra; esory ny fidirana duplicate; manova sy manara-penitra ny angona; ampidiro ao amin'ny rafitry ny Marketing Automation an'ny CRM ny data ary farany mamolavola sy manorata rafitra firaketana tahiry iray izay mampifangaro ireo fepetra isan-karazany.
Reraka ve ianao? Izaho… ary ny masoko dia manjelanjelatra tsy mijery ity takelaka ity ihany tato anatin'ny telo ora….
Mampahafantatra ny fanomanana ny angona talend
Ankehitriny, miaraka amin'ny Talend Data Preparation, azonao atao ny miditra, manadio ary manomana angona amin'ny fomba tsotra sy mora. Voalohany, rehefa miditra amin'ny fitaovana ianao dia mitaona anao amin'ny alàlan'ny torolàlana pop-up hanafatra ny rakitra Excel na karazana loharanom-pahalalana hafa. Avy eo misafidy io takelaka io ihany ianao ary amin'ny tsindry vitsivitsy monja dia azonao atao ny manadio, manara-penitra, mameno ny saha ary manivana ny angon-drakitra isaky ny faritra, ny anaram-piasana sns, mba hahitanao ny kalitaon'ny fitarihanao vaovao. Toa izao izao ny takelaka fisavoritanao taloha:
Azonao atao izao ny manafatra mora foana ireo angona voadio ao amin'ny Tableau mba hanatsarana kokoa ny hetsika manaraka. Ho fanampin'izay, rehefa nisafidy sy nanadio saha isan-karazany tao anaty takelakao ianao, ny Talend Data Preparation dia nitahiry firaketana an'ireo safidinao ireo. Ny safidy ataonao dia mandrafitra ny 'recette' azonao tanterahina anaty rakitra raha tsy hamboarina indray. Ka amin'ny fotoana voalohany iarahanao miasa amin'ny sombin-databatra dia manangona fotoana ianao. Fa rehefa mamelombelona ny angon-drakitra (izany hoe amin'ny seho amin'ny herintaona), tsy vitan'ny hoe mampihena ny fotoana fotsiny ianao, fa kosa manala ny asa ilaina tanteraka! (Ankehitriny dia manana fotoana malalaka amin'ny andronao ianao farafaharatsiny mba hisotroana kafe na handehanana mamaky ny valan-javaboary mandritra ny sakafo atoandro.
Tsy ho an'ny mpivarotra ihany izany
Fiomanana amin'ny angona talend dia mifanentana tsara ihany koa ho an'ny mpitantana loharanon-karena sy tombontsoa ho an'ny mpitantana, mpandalina ara-bola sy ara-bola, na andraikitra rehetra mandany fotoana be dia be hiasa miaraka amin'ny angona na handrovitra ny volon'izy ireo amin'ny takelaka. Na manadio ny varotra tradeshow ianao, manisa ny fisondrotan'ny fahazoana mety, manadihady ny fifanakalozana na manamboatra ny teti-nify tsara indrindra, ny fahitana, ny fiantohana fiainana ary ny drafitry ny fandaniam-bola malefaka ho an'ny orinasanao — izao ny fidirana amin'ny fahitana dia potsitra fotsiny!
Mamiratra sy mahay amin'ny zavatra ataonao ianao — koa maninona no mandany fotoana bebe kokoa amin'ny famoahana angona vs. fizarana ny fahitanao ny ekipanao? Ka izao, ny hany fanontaniana tokony hapetrakao amin'ny tenanao dia ny: aiza no hahazoako azy? !!!
Sintomy ny kinova maimaimpoana momba ny fanomanana ny angona Talend anio!
Tags: CRMDatafahadiovana datafanomanana datafanodinana datatalendfanomanana angon-drakitra talend
Ny fiantraikan'ny fonosana manokana amin'ny varotra ecommerce anao?
Fepetra fizarana mailaka 10 tokony hojerenao